Andiany voalohany amin'ny The Walking Dead: sisintany vaovao maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Ny andian-tantara amin'ny fahitalavitra The Walking Dead, izay efa nidina an-habakabaka nandritra ny 7 taona, dia nanjary loharanom-baovao tamin'ny tontolon'ny zombies. Betsaka ny andiany aingam-panahy avy amin'izany, azontsika atao ny miantso azy io, mahazatra ny maty maty toa ny Z Nation, Fear The Walking Dead, ity farany dia mamela zavatra maro irina raha ny voalohany, na dia manana teti-bola mafy aza, dia mahafinaritra kokoa amin'ny vitsivitsy manohina ny vazivazy izay miorina amin'ny surreal. Saingy ity andiany ity koa dia nanome aingam-panahy lalao video marobe, toy ilay resahintsika anio: The Walking Dead: New Frontier, lalao izay manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 4,99 euro ary izany dia misy ny fizarana voalohany, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana.
Ao amin'ny famaritana ny App Store dia afaka mamaky isika:
Taorian'ny nandravana ny fiaraha-monina teo am-pelatanan'ny maty, dia nipoitra avy amin'ny korontana ny paosin'ny sivilizasiona. Fa amin'ny vidiny inona? Azon'ny velona atokisana ve ity sisintany vaovao ity? Raha i Javier, tovolahy tapa-kevitra ny hahita ilay fianakaviana nalaina taminy, dia mihaona tovovavy iray efa niaina ny famoizana azy tsy takatry ny saina ianao. Clementine ny anarany, ary ny hoavin'izy ireo dia mifamatotra amin'ny tantara izay ny safidy rehetra raisin'izy ireo dia mety ho farany ho azy ireo.
The Walking Dead: A New Frontier dia andiany fizarana dimy, ny tsirairay dia azo vidiana tsy miankina amin'ny 4,99 euro, na dia fonosana iray aza no atolotra azy rehetra afa-tsy ilay voalohany tafiditra ao amin'ny lalao. Mba hahafahana mankafy ny lalao, ny fitaovantsika dia tsy maintsy tantanan'ny iOS 9 na avo kokoa ary mifanaraka amin'ny iPhone 5s mandroso, iPad Mini 2 mandroso, ary iPad Air mandroso. Mitaky farafahakeliny 880 MB maimaimpoana amin'ny fitaovanay ary ny dikanteny amin'ny teny Espaniola, noho izany ny fiteny dia tsy ho enta-mavesatra amin'ny lalao.
Ny Maty Ny Mandeha: Lalana vaovaomaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ilay Maty Mandehandeha: Episode New Frontier Vaovao Maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Izay antenaiko avy amin'ny Apple amin'ny 2017